Sida loo xiiro timaha wiilka - Ogow dhammaan talaabooyinkiisa | Niman qurux badan
Sida timaha wiilka loo jaro
Goynta timaha wiilka waxay noqon kartaa caqabad, laakiin maaha wax aan macquul ahayn. Waalidiin badan ayaa barta timaha carruurtooda, midkoodna gacan maqas ama mandiil. Kuwa kale waxay raadinayaan hab ay wax ku bilaabaan, markaa waxaan ku siin karnaa sida loo xiiro timaha wiilka hab la taaban karo oo go'aan leh.
Ujeedadu waxay tahay, si loo qabto shaqo si hufan. samirka iyo hawlkarnimada waa in lagu dadaalaa. Marka hore waxay noqon kartaa mid qaali ah sida loo gooyo wax la qabanayo markii ugu horeysay, laakiin waqti ka dib farsamadan aad ayey uga fududaan kartaa inta aad malaynayso. Haddii aad ogaato in tani aysan ahayn shaygaaga, waxaad had iyo jeer shaqadaada gelin kartaa gacanta xirfadle.
1 Maxaan u baahanahay inaan wiilka ka jarno timaha?
2 Sida timaha timaha timaha loogu jaro tallaabo tallaabo
3 Timaha oo mandiil lagu gooyo
Maxaan u baahanahay inaan wiilka ka jarno timaha?
Si aad timaha u jarto ilmaha waxaad u baahan tahay maqas fiiqan oo wanaagsan. Fikraddu waxay noqon doontaa kuwa gaarka ah ee timaha jarista, oo ku habboon qaabka gacanta, yaryar oo dhaadheer. Shukumaan dhuuban oo lagu duuduubo qoorta iyo jidhka ilmaha, si aanay timaha soo dhacay u dhibin.
Shanlo aad bay uga fiicnaan doontaa burushka, buufin biyo ah si ay ugu tuurto timaha qalalan iyo tuwaal kale si looga saaro biyaha xad dhaafka ah.
Mandiil koronto timaha jarista waxay sidoo kale ku habboon tahay timaha jarista. Had iyo jeer waxay dhammayn doontaa faahfaahin kasta oo aad u wanaagsan waxayna xiiri doontaa dhammaan meelaha aad rabto inaad gooyso.
Raadi waqtiga ugu fiican ee maalinta Si ay timaha u jaraan, carruurtu waxay u muuqdaan kuwo aad u nasasho la'aan ah oo aan mar walba ku qancin karno wax kasta. Ha isku dayin inaad sameyso markuu ilmuhu xanaaqsan yahay, oohinta ama xanaaqa uun, aakhirka waxa laga yaabaa in daqiiqadu aad u kacsanaato.
Mid ka mid ah talooyinka ayaa ah inaad awood u leedahay inaad u sharaxdo ilmaha taas waxaad qaadan doontaa waqti madadaalo ah, in natiijada sugitaanka iyo in weli way u qalantaa Haddii uu yahay ilmo aan nasasho lahayn, waad u soo bandhigi kartaa wax aan ku maaweelin karo, laga bilaabo toy yar, majaajillo ama tignoolajiyadayada daahsoon. Laakin sii maaweelada noocaan ah sida maciinka ugu dambeeya, marka ilmuhu durba bilaabay inuu ka walwalo sugida.
Sida timaha timaha timaha loogu jaro tallaabo tallaabo
Waxaan dooranaa meel raaxo leh halkaas oo madaxa ilmuhu ka sarreeyo oo aan timaha si fiican u xiiri karno. Way ku habboon tahay inaad haysato madaxa dhaqday taasina ay keentay in uu qoyo. Waxaan ku saareynaa qoyaanka xad dhaafka ah tuwaal waxaanan ku duubi doonaa tuwaal kale oo ku saabsan jidhka ilmaha, annagoo xoogga saarayna in qoorta loo saaro si aanay timuhu u dhex marin qoorta.
Si fiican ayaanu timaha u shanlaynaa si aanay u qalloocin. Waxaan ku bilaabi doonaa qaybta sare ee timaha, qaadashada qufulka iyo jarista cidhifyada. Timaha oo dhan ayaanu dib u shanlaynay iyo waxaan ku calaamadeynaa xariiq dhexda. Waxaan u shanleyneynaa dhinaca madaxa qaybta aan ku bilaabayno jarista.
Vamos soo qaadista timaha faraha dhexdooda gacmaha is haysta oo timaha goo. Waxaan had iyo jeer ixtiraami doonaa isla dhererka timaha ee faraha dhexdooda, si wax walba u dhammaadaan si siman, laakiin wax yar ayaanu jaraynaa.
Waan gooyn doonaa dhinacyada madaxa oo u socda xarunta oo waxaan aadi doonaa inaan sameyno dhaqdhaqaaq isku mid ah, anagoo timaha ka qaadanayna faraha dhexdooda oo aan jarayno timaha dheeraadka ah. Dhammaatay dhammayn dhinacyada iyo qaybta hoose ee u dhaxaysa taajka iyo nape. Meelahaasi waxay yeelan doonaan heer aad uga hooseeya timaha intiisa kale, taasna waxaan ku caawin karnaa nafteena isticmaalka mandiilada.
Waxa kaliya oo hadhay in la dhammeeyo qayb ka mid ah bangsyada, jeexjeexyada iyo aagga nape. Waxaan ku samayn karnaa maqas samaynta gooyn toosan, laakiin xoogaa qarsoomi ah. Waxa kale oo aad qaybtan ku samayn kartaa mandiilka. Waxaad ku qaadanaysaa timo shanlo ah, oo hoos u shanleysa oo si toos ah u jar timaha soo hadhay. Waayo aagga cirifka ayaa la samayn karaa si la mid ah, Laakin ka dib ku dhamee maqaska oo gooyays yar yar oo meelo kala duwan leh.
Timaha oo mandiil lagu gooyo
Waxaan raacnaa tillaabooyin la mid ah tii bilawgii, anagoo ilaalinayna timaha qoyan. Waxaan ku bilaabi doonaa gelin madaxa lambarka 3 ee mishiinka iyo waxaan ka jari doonaa timaha hoos ka soo bilow, agagaarka madaxa oo dhan. Waxaan ka tagi doonaa qaybta sare in badan ka dibna waxaan dhammeyn doonaa hadhow.
Waxaan dhigeynaa madaxa lambarka 4 si ay ugu biiraan aagga dhinacyada qaybta sare, had iyo jeer dhaqdhaqaaq isku mid ah, hoos ilaa sare. Goobta madaxa lambarka 2 oo dul mar dhammaan darfaha, iyo sidoo kale jeexjeexyada iyo aagga cirridka.
Madaxa sare ee madaxa waxaa fiican in maqas lagu gooyo. waxaan qaadan doonaa xadhkaha timaha sidii talaabooyinkii hore. Waxaan si fiican u dhammayn doonaa aagga cirifka anagoo samaynayna gooyn yar oo aan toos ahayn ama gooyn, si aan loo siin sawirka guud ee malawadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida timaha wiilka loo jaro
Niman bidaar leh oo caan ah
Sida Ragga Ay Si Wanaagsan U Lebistaan